I-Stanford yokuphanda ukuSebenzisa okuTsha kwe-Apple Watch yezeMpilo | IPhone iindaba
IYunivesithi yaseStanford, eMelika, icwangcise ukumiliselwa kwenkqubo entsha yophando eza kubandakanya ukuhanjiswa ukuya kuthi ga kwizixhobo zeApple Watch phakathi kwamalungu oluntu lwaseyunivesithi.
Injongo yale nkqubo uphando ngeendlela ezahlukeneyo onokusebenzisa ngazo iApple Watch yakho ukuqhubela phambili ukuphucula inkathalelo yezempilo. Ukongeza ekunikezeleni i-smartwatch ka-Apple, iziko leyunivesithi liya kuthi linike i-XNUMX yeedola iyonke ngonyaka omnye ukusuka ngo-Epreli ukuya kwiprojekthi ephumeleleyo ukuze iqhubeke nophando.
1 I-Apple Watch kunye nokuphucula ukhathalelo lwempilo
1.1 Inkqubo yaseStanford
I-Apple Watch kunye nokuphucula ukhathalelo lwempilo
Xa inkampani yazisa iApple Watch, ngoSeptemba 2014, yanikwa iindlela ezimbini ezicacileyo kwesi sixhobo. Kwisandle esinye, Ndifuna ukuyivelisa "njengefashoni kunye nemveliso yokunethezeka" Apho waqala khona ukuyivelisa kwiimagazini, iivenkile ezitofotofo kwaye ehamba nabantu abadumileyo, esungula iimodeli ezenziwe ngegolide kwaye ixabiso lazo laliphezulu. Ukungaphumeleli kwakugqibeleleyoKwaye ngelixa singazi elona nani leeyunithi ezithengisiweyo, ezo modeli azisekho kwimveliso kwaye kugxilwe phantse kuye kwaphela.
Ngakolunye uhlangothi, I-Apple Watch yaziswa njengesixhobo esigxile kwimpilo nakwimizimba, kwaye kulapho inkampani iphumelele khona. Kubonakala ngathi kubasebenzisi abaninzi yile nto ibaluleke kakhulu malunga nokubukela. Ukongeza, izinto ezahlukeneyo zempilo zibonile kwiApple Bukela amathuba amahle okuphucula ukhathalelo lwempilo kwizigulana kunye / okanye ukuthatha ulawulo olukhulu lweeparameter ezithile, phakathi kwezinye izinto.
Ngoku yiYunivesithi yaseStanford uqobo ejoyina le ndlela I-Apple Watch njengesixhobo esinokunceda ukuphucula ukhathalelo lwempilo lwabantu. Ukwenza oku, icandelo lezemfundo lisungule inkqubo entsha enenjongo yokufumana usetyenziso olutsha lwe-Apple Watch evumela le njongo ichazwe ngasentla.
Ngenxa yoku, eli ziko likulungele thenga kwaye usasaze ukuya kuthi ga kwewaka iApple Watch phakathi kwabafundi bayo kunye necandelo lobuchule, kwaye unike $ 10.000 isibonelelo sophando kwiprojekthi ephumeleleyo ukuze, unyaka, uqhubeke nophando lwakho.
"Sinomdla ngokukodwa kwiiprojekthi ezinefuthe eliphezulu eliya kuthi libe nefuthe elihle kubemi abakhethiweyo kunye / okanye ukuhamba komsebenzi", inokufundwa kwiwebhusayithi yeCentro de Salud Digital.
Umhla wokugqibela wokungenisa izicelo unqunyelwe kumalungu eFakhalthi yeYunivesithi yaseStanford, kwaye sele ivulekile de kube nguFebruwari 26. Isifundo siphela siya kuhlala unyaka omnye kwikhalenda kwaye siya kuqala ngo-Epreli 2017.
Ngokuhambelana nemigaqo yenkqubo, I-Apple Watch kufuneka idityaniswe kwinkqubo yokufunda egxile ekusetyenzisweni kokulandela umkhondo kunye / okanye nemisebenzi yonxibelelwano ukubona ukuba isixhobo sinokubangela njani utshintsho kwezempilo.a:
I-Apple Watch kufuneka idityaniswe kwinkqubo ngokubanzi okanye uyilo lokufunda apho: 1) ukubonwa kwewotshi (umsebenzi, ukubetha kwentliziyo, kunye / okanye idatha ye-accelerometer emsulwa) isetyenziselwa ukulinganisa inkqubela phambili yendawo efanelekileyo yokuphela kwento yabemi. yesifundo; 2) Iimpawu zonxibelelwano / zokwazisa ze [Apple] Bukela zisetyenziselwa ukuqhuba utshintsho lwendlela yokuziphatha / uqeqesho (abaphandi kufuneka basebenzise usetyenziso lwe-iOS ngolwandiso lweapp lokuyila okanye ukuyila ukuhamba komsebenzi apho izaziso zokutyhala zinokuhanjiswa kwiWatch).
Kunyaka ophelileyo, kudliwanondlebe noBloomberg, umphathi we-Apple UTim Cook sele eyiphindaphindile inzala yenkampani ekuncedeni ukuphucula ukhathalelo lwempiloukuya. “I-grail engcwele yomlindo iyakwazi ukubeka esweni ngakumbi nangakumbi into eyenzekayo emzimbeni wakho. Ukuba unesixhobo esazi kakhulu malunga nawe, singamangalisa, kwaye singandisa ubomi kwaye sandise umgangatho, utshilo uCook.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » IStanford yokuphanda ukuSebenzisa okuTsha kwe-Apple Watch yezeMpilo
Amaqhawe omlilo omlilo, umdlalo omtsha kaNintendo we-iOS okhoyo ngoFebruwari 2